STRAINERS & FILTERS စက်ရုံ၊ ပေးသွင်းသူများ - China STRAINERS & FILTERS ထုတ်လုပ်သူများ
T အမျိုးအစား filter
လည်ပတ်မှုနိယာမအချို့သောပစ္စည်းများကိုတပ်ဆင်သည့်အခါပိုက်လိုင်းအတွင်းသို့ယူဆောင်လာသည်။ ထုတ်လုပ်သည့်အခါပစ္စည်းအမျိုးမျိုးလည်းပါ ၀ င်သည်။ filter မှတဆင့်အရည်စီးဆင်းသောအခါညစ်ညမ်းမှုအားလုံးသည်မျက်နှာပြင်ပေါ်သို့ပွင့်သွားပြီးမျက်နှာပြင်သန့်ရှင်းသွားသည်။ မှတ်ချက် - T type filter ၏ screen area သည် filter များထဲတွင်အသေးငယ်ဆုံးဖြစ်ပြီး၎င်းသည်အခက်ခဲဆုံး drain filter ။ နည်းပညာဆိုင်ရာ Parameter များ 1. အလုပ်ဖိအား: 1.6 ~ 4.0MPa 2. အလတ်စား: ရေ, သဘာဝဓာတ်ငွေ့ 3. Sh ...